Enter the Fat Dragon (2020) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 5.6/10 692 votes
Donnie Yen, Hiro Hayama, Lin Qiu-Nan, Louis Cheung, Naoto Takenaka, Niki Chow, Sandra Ng Kwun-Yu, Teresa Mo, Tetsu Watanabe, Wong Jing
ဒီနမှေ့ာတော့ IP Man ကားထဲကမငျးသား Donny Yen ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ Enter The Fat Dragon မွနျမာစာတနျးထိုးကားလေးတငျပေးလိုကျပွီနျော …….
ဇူဖူးလောငျ ….. အရမျးကူညီတကျတဲ့ ဟောငျကောငျရဲအရာရှိတဈယောကျပါ …..
ဘာပွသနာဖွဈဖွဈ သူအမွဲ ပါဝငျ ကူညီတကျပါတယျ ….
ကူညီတကျလောကျ လကျသံကလညျးပွောငျလှနျးတာကွောငျ့ ပွသနာလဲခနခနရှငျးရပါတယျ …..
သူ့ရဲ့ ဇနီးလောငျးလေးနဲ့ မင်ျဂလာဓါတျပုံ ရိုကျဖိုသှားရငျး ဘဏျဝငျပွီးပိုကျဆံထုတျနစေဉျ ဓါးပွတှကေ ဘဏျကိုဝငျစီးလိုကျကွတယျ …..
အဲ့ဓါးပွတှကေိုလိုကျဖမျးရငျး ရဲစခနျးကို ဓါးပွတှရေဲ့ ခိုးရာပါကားနဲ့ ဝငျတိုကျမိသှားတယျ ….
ရဲအရာရှိကလညျးအရမျးဒေါသထှကျပွီး သူ့ကိုရာထူးခလြိုကျတယျ ……
ရာထူးလဲခခြံရ …. မင်ျဂလာပှဲလဲပကျြ …….
စိတျဓါတျတှကေပြွီး ဝတုတျကွီးဖွဈလာရော ….
တဈရကျမှာတော့ …..အတိတျမနေ့သေူ လူတဈယောကျကို ဂပြနျလိုကျပို့ရငျး ……
ရာခူဇာတှနေဲ့ ထိတျတိုကျတှတေ့ော့တာပဲ ….
နောကျပိုငျးဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲဆိုတာတော့ အောကျက Link ထဲမှာ ဝငျပွီးကွညျ့လိုကျပါ …..
ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Kyram ဖွဈပါတယျ
ဒီနေ့မှာတော့ IP Man ကားထဲကမင်းသား Donny Yen ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Enter The Fat Dragon မြန်မာစာတန်းထိုးကားလေးတင်ပေးလိုက်ပြီနော် …….
ဇူဖူးလောင် ….. အရမ်းကူညီတက်တဲ့ ဟောင်ကောင်ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ပါ …..
ဘာပြသနာဖြစ်ဖြစ် သူအမြဲ ပါဝင် ကူညီတက်ပါတယ် ….
ကူညီတက်လောက် လက်သံကလည်းပြောင်လွန်းတာကြောင့် ပြသနာလဲခနခနရှင်းရပါတယ် …..
သူ့ရဲ့ ဇနီးလောင်းလေးနဲ့ မင်္ဂလာဓါတ်ပုံ ရိုက်ဖိုသွားရင်း ဘဏ်ဝင်ပြီးပိုက်ဆံထုတ်နေစဉ် ဓါးပြတွေက ဘဏ်ကိုဝင်စီးလိုက်ကြတယ် …..
အဲ့ဓါးပြတွေကိုလိုက်ဖမ်းရင်း ရဲစခန်းကို ဓါးပြတွေရဲ့ ခိုးရာပါကားနဲ့ ဝင်တိုက်မိသွားတယ် ….
ရဲအရာရှိကလည်းအရမ်းဒေါသထွက်ပြီး သူ့ကိုရာထူးချလိုက်တယ် ……
ရာထူးလဲချခံရ …. မင်္ဂလာပွဲလဲပျက် …….
စိတ်ဓါတ်တွေကျပြီး ဝတုတ်ကြီးဖြစ်လာရော ….
တစ်ရက်မှာတော့ …..အတိတ်မေ့နေသူ လူတစ်ယောက်ကို ဂျပန်လိုက်ပို့ရင်း ……
ရာခူဇာတွေနဲ့ ထိတ်တိုက်တွေ့တော့တာပဲ ….
နောက်ပိုင်းဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ အောက်က Link ထဲမှာ ဝင်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ …..
ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Kyram ဖြစ်ပါတယ်
Kenji Tanigaki Wong Jing
Donnie Yen Hiro Hayama Lin Qiu-Nan Louis Cheung Naoto Takenaka Niki Chow Sandra Ng Kwun-Yu Teresa Mo Tetsu Watanabe Wong Jing
Anthony Chan Bob Lam Donnie Yen Hiro Hayama Jerry Lamb Jim Chim Sui-Man Joey Iwanaga Lawrence Chou Lin Qiu-Nan Louis Cheung Min Hun Fung Naoto Takenaka Niki Chow Philip Ng Sandra Ng Kwun-Yu Teresa Mo Tetsu Watanabe Tyson Chak Wong Cho-lam Wong Jing Yan Hua Yu Kang
Option 1 megaup.net 457 MB SD (480p)
Option2storage.msubmovie.com 457 MB SD (480p)
Option4yuudrive.me 457 MB SD (480p)
Option5uptomega.com 457 MB SD (480p)
Option6usersdrive.com 457 MB SD (480p)
Option 10 sharer.pw 1.1 GB HD (1080p)
Option 11 usersdrive.com 1.1 GB HD (1080p)
Option 12 uptomega.com 1.1 GB HD (1080p)
Option 13 storage.msubmovie.com 2.1 GB FHD (1080p) AC3 5.1
Option 14 megaup.net 2.1 GB FHD (1080p) AC3 5.1
Option 15 yuudrive.me 2.1 GB FHD (1080p) AC3 5.1
Option 16 sharer.pw 2.1 GB FHD (1080p) AC3 5.1
Option 17 usersdrive.com 2.1 GB FHD (1080p) AC3 5.1